Khin Maung Chin: ချစ်မိသွားပါသဖြင့် ၇
21 May 2011 2:57 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ရှေ့ကိုကားတစ်စီး ဝူးးးးကနဲထိုးဆိုက်လာပြီးဟွန်းတီးနေတော့ တိုက်ဂါးရောက်လာပြီဆိုတာကျနော်သိလိုက်တယ်လေ.. ချက်ချင်းပြေးပြီး
''တိုက်ဂါးရေ တိုက်ဂါး ကျနော်အချစ်သစ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်၇ပြီဗျာ''
ဆိုပြီးဝမ်းသာအားရပြောလိုက်တော့ တိုက်ဂါးက ကျနော်အူမြူးနေတာကိုကြည့်ပြီးဟေးကနဲထအော်တယ်လေ..
♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦
အိမ်ရှေ့အိမ်မှယမင်းရဲ့အသံစူးစူးလေးကြောင့်အတွေးတွေနဲ့နစ်မျောနေတဲ့ကျနော်ဆက်ကနဲဖြစ်သွားပါတယ်.။ ယောက်ဖနဲ့မမကြီးလည်းပြေးထွက်၊ ကျနော်လည်းပြေးထွက် အိမ်တံခါးဝမှာတိုက်မိတော့မလိုဖြစ်သွားတော့ မမကြီးက(ငါသိနေတယ်နော်ဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့) ကျနော့်ကိုမချိုမချဉ်ပြုံးပြီးကြည့်လိုက်တယ်လေ... ကျနော်လည်းမသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးယမင်းကိုလှမ်းမေးလိုက်တာပေါ့..
'' ဒီမှာလေ. အိမ်နောက်ဖေးမှာ
''မောင်လေး သွားကြည့်ပေးလိုက်ပါကွယ်.. အိလည်းမရှိဘူးထင်တယ်အိမ်မှာ သွား သွား''
'' ဘယ်မှာလဲယမင်း? ကိုယ်ကြည့်ပေးမယ်''
လို့ပြောပြီးယမင်းကဦးဆောင်အိမ်နောက်ဖက်ကိုဝင်သွားတော့ ကျနော်လည်းလိုက်ဝင်သွားလိုက်တော့တာပေါ့.. ဟုတ်တယ်ဗျာ.. လက်ဆေးတဲ့ဘေစင်ရေပိုက်ခေါင်းကကွဲထွက်ပြီးရေတွေပန်းထွက်နေတာများ မီးဖိုချောင်တစ်ခုလုံးရွှဲနစ်နေတာပဲ.. ကျနော်လည်းပြေးပြီးရေပိုက်ခေါင်းကို လက်နဲ့ဖိအုပ်ချလိုက်တော့
'' တွေ့တယ်မလားယမင်း ကိုယ်ရောက်လာတာနဲ့အဆင်ပြေသွားတာမြင်ပြီမလား? ''
'' ဟုတ်တာပေါ့ကိုသီဟ..ကိုသီဟတော်လို့ပေါ့. ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း ..Thank you ''
လို့ပြောကာဟန်ပါပါလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မလို့သူ့လက်ကိုကမ်းပေးလာတော့ ကျနော်လည်းမေ့ပြီးရေပိုက်အုပ်ကိုင်ထားတဲ့ညာဖက်လက်ကိုလွှတ်မိပြီးတော့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ပြင်လိုက်မိတာပေါ့..။
အဲဒီမှာပဲစောစောကမပန်းနိုင်တဲ့ရေတွေက အရှိန်အဟုန်နဲ့ဒေါသတကြီးပန်းထွက်လာပါလေရောဗျာ.. ဒီတော့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်အားရပါးရရယ်မောကြပြီးဝတ်ထားတဲ့ကျနော့်အင်္ကျီကိုချွတ်.. အဲဒီအင်္ကျီနဲ့ရေပိုက်ခေါင်းကိုမိမိရရဖမ်းချည်ပစ်လိုက်တယ်လေ.. ဒီတော့မှရေတွေမပန်းထွက်နိုင်တော့ပဲ မပြောစလောက်လေးသာစီးကျရုံစီးကျနေတော့တာပေါ့.. ကျနော်ဝတ်လာတဲ့အင်္ကျီတော့ထားခဲ့ရမှာပေါ့လေ.. ပြီးတော့ ယမင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်
'' ကိုသီဟ ခဏလေး''
လို့ပြောပြီးအတွင်းခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်လေ..ကျနော်လည်းရပ်စောင့်နေရင်း ယမင်းကလက်ထဲမှာကိုယ်သုတ်ပုဝါသဘတ်အကြီးကြီးကိုကိုင်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့တာပေါ့ဗျာ.. ပြီးတော့ရေတွေစင်နေတဲ့ကျနော့်ကိုယ်ကို နုနုရွရွလေးသုတ်ပေးတော့ အနီးကပ်မြင်နေရတဲ့သူ့မျက်နာလေးကို ကျနော်အမှတ်မထင်သေသေချာချာကြည့်လိုက်မိတော့တာပါပဲ.. အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ဒီ့အရင် ယမင်းကိုကျနော်
ခုလိုသေသေချာချာမကြည့်ခဲ့ဖူးဘူးဗျာ.. ခုကြည့်မိတော့မှပဲသူ့မျက်နာပေါ်မှာအေးချမ်းခြင်းတွေ၊ကြင်နာတတ်ခြင်းတွေနဲ့ကြည်လင်နေတာရယ်၊ နောက်ပြီးအပြစ်ကင်းစင်စွာနက်မှောင်တောက်ပနေတဲ့မျက်ဝန်းနက်နက်ကလေးတစ်စုံရယ်..
အဲဒါတွေကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတော့ ငြိမ်သက်နေတဲ့ကျနော့်ရင်တွေတစ်ခါပြန်ခုန်လာမိတယ်လေ.. ဒါနဲ့လန့်ဖြန့်ပြီးယမင်းကိုအသာလေးတွန်းဖယ်ကာအိမ်ဖက်ကို ကျနော်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်... အိမ်ပြန်ရောက်တာတောင်
စောစောကခုန်နေတဲ့ရင်က မငြိမ်သေးဘူးဗျာ.. ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ရှေ့ကိုကားတစ်စီး ဝူးးးးကနဲထိုးဆိုက်လာပြီးဟွန်းတီးနေတော့ တိုက်ဂါးရောက်လာပြီဆိုတာကျနော်သိလိုက်တယ်လေ.. ချက်ချင်းပြေးထွက်သွားပြီး
ဆိုပြီးဝမ်းသာအားရပြောလိုက်တော့ တိုက်ဂါးက ကျနော်အူမြူးနေတာကိုကြည့်ပြီးဟေးကနဲထအော်တယ်လေ..တကယ်တော့သူတို့အားလုံးဟာ ကျနော့်ကိုချစ်လွန်းလို့သာမပြောရက်ကြပေမယ့်
'' နေပါဥိးတိုက်ဂါးရယ်..အချစ်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပျော်နေတာက ကျနော်ပါ..ခင်ဗျားကဘာလို့မြူးနေရတာလဲ?''
''ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲသီဟရယ်.. မင်းခုလိုမပျော်မရွှင်ပဲပေတေနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ.. ခုမင်းပျော်ရွှင်နေတာကြည့်ပြီးဝမ်းသာလို့ငါအော်လိုက်တာပါကွာ''
''ဒါပေမယ့်တိုက်ဂါးရယ်..အချစ်ကိုတော့တွေ့နေပါပြီ..ကျနော်နားမလည်တာကအချစ်သစ်တစ်ခုက ခုလိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သလားဆိုတာပါပဲ.. ကျနော်မှားသလား၊မှန်သလားပြောကြည့်ပါဥိးတိုက်ဂါးရယ်'' လို့မေးတော့
'' ဟေ့ကောင်အဲဒါငါ့ပစ္စည်းလေ... မင်းကွာသူငယ်ချင်းမျက်နာမှမထောက်..လုပ်ရက်တယ်''
''ဟေ့ကောင်သီဟမြန်မြန်ဖွင့်ပြောပြီးလက်ထပ်ခွင့်မြန်မြန်တောင်းလိုက်ကွ..မျက်လုံးဆိုတာသိပ်မသေချာဘူး.. ပါးစပ်နဲ့လဲပြောရမယ်.. နားနဲ့လဲကြားရမယ်..ဒါမှသေချာတာ.. မင်းပါးစပ်နဲ့ဖွင့်ပြောတာကိုသူ့နားနဲ့ကြားအောင်ရယ်..သူ့ပါးစပ်ကအဖြေပေးမှာကိုမင်းနားနဲ့ကြားအောင်ရယ်.. မင်းအမြန်ဆုံးလှုပ်ရှားပေတော့သီဟရေ.''
'' ဟေ့ ယမင်း..ကိုယ်ဒီမှာ.''
ဆိုပြီးလက်လှမ်းပြလိုက်တော့မှယမင်းက ကျနော့်ကိုမြင်သွားပြီး ကျနော်ထိုင်နေတဲ့ဝိုင်းကိုရောက်လာတော့တာပေါ့...
'' ကိုသီဟ..ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရုတ်တရက်ကြီး ? ဘယ်
သူ့ကိုမှမပြောပါနဲ့၊ဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့ဆိုပြီးဒီကိုချိန်းလိုက်တာဘာများအရေးကြီးလို့လဲဟင် ? ''
''အင်းးဟုတ်ပါပြီရှင်..ဒါပေမယ့်ကိုသီဟအဲဒီကောင်မလေးကိုချစ်နေတာသူ့ကိုရောဖွင့်ပြောပြီးပြီလား ? ''
ကောင်လေးတစ်ယောက်ကသူတကယ်ချစ်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှေ့မှာခံစားချက်အပြည့်နဲ့ချစ်ခွင့်ပန်နေတဲ့ဖီးလ်ကို အပြည့်အဝကျနော်ရေးမပြတတ်လို့ပါ....စကားချပ်)
''ယမင်းဘယ်လိုသဘောရလဲ ? ကိုယ်ပြောတာကို ...''
''ကဲ..ဒါဆိုအဲဒီကောင်မလေးကယမင်းပဲဆိုပါတော့ ခုကိုယ်ပြောနေတာတွေကိုယမင်းဘယ်လိုထင်လဲ ? ''
'' အင်းလေ..ခုလဲသူ့ကိုပဲမေးနေတာပါ ''
''ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဟင်း''
ဆိုပြီးရယ်ချလိုက်တယ်ဗျာ... သူကတော့ကျနော့်ကိုဘယ်လိုမြင်နေလဲမသိပါဘူးး နွယ်နဲ့ဝေးခဲ့ရလို့ကယောင်ချောက်ခြားဖြစ်ပြီးပြောနေတယ်များထင်လားမသိဘူးဗျာ..
'' ဒါဆိုဘယ်တော့ကကိုယ်တို့ပြန်တွေ့ကြမလဲဟင် '' လို့မေးတော့
ဆိုပြီးမတင်မကျနဲ့ကျနော့် propose ဇာတ်လမ်းလေးကပြီးသွားတာပါပဲဗျာ..ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်းရေရေရာရာမသိလိုက်ဘူးး ကျနော်ပြောလိုက်တာလိုရင်းကောရောက်ရဲ့လား၊ ပြည့်စုံမှု့ကောရှိရဲ့လားဆိုတာပေါ့..။
''ဒီလိုဆိုဒီနေ့သူလာမှာပေါ့..ဟုတ်လားသီဟ ? ''
'' Yes Tiger ''
ဆိုပြီးတိုက်ဂါးက လာနွဲ့နေသေးတယ်လေ.. အိအိဝင်းကသူ့ကိုအဖြေမှမပေးသေးတာ....သူရင်ပူမယ်ဆိုလဲပူလောက်ပါတယ်လေ..
'' ရှုး တော်တော့တိုက်ဂါးး ဟိုမှာ ယမင်းရောက်လာပြီ..ခင်ဗျားစကားရပ်လိုက်တော့''
လို့အ်ာပြောလိုက်တာပေါ့.. ဒီတော့မှယမင်းက ကျနော်တို့ရှိနေတဲ့အိမ်ဘေးကပန်းခြံလေးထဲကိုရောက်လာပြီးတော့
''သြော် ကိုတိုက်ဂါးကြီးလည်းရောက်နေတာကိုးးအတော်ပဲ.. ''
'' ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ ယမင်း''
'' ရှင်တို့ ကြိုသိနေကြပါလား''
''ဟုတ်ပါတယ်ယမင်း ကျနော်သိတာ ဟောဒီကသီဟပြောပြလို့သိရတာပါ.''
လို့တိုက်ဂါးကပြောတော့ ယမင်းမျက်ဝန်းတွေက ကျနော့်ဆီကိုလှည့်လာတော့တာပါပဲဗျာ...
'' ယမင်းရဲ့နှလုံးသားရေးရာပဲဗျာ..ကိုယ်သိထားတာမဆန်းပါဘူး ''
'' အိုခေ..ဒါဆိုရင်ရော့ကိုတိုက်ဂါး..ဒီဟာရှင့်အတွက် ''
ဆိုပြီးပြောတော့လဲ ကျနော်ကကျနော့်အတွေးနဲ့ကျနော်ဟုတ်သားပဲ.. ငါက ကာယကံရှင်ပဲလေ..ဆိုပြိးတွေးပျော်သွားမိတာပေါ့...
'' ဒါနဲ့ကိုသီဟ ယမင်းအကြောင်းကို မမကြီးကိုပြောပြပြီးပြီလား?''
''♦+@# %+'♦+@# %+'♦+@# %+'♦+@# %+'♦+@# %♦+@# %+'♦+@# %+'♦+@# %+'♦+@# %+'♦+@# %''
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးတစ်ယောက်မျက်နာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီးငိုင်သွားကြတယ်လေ.... ဟုတ်တယ်လေ..သတို့သားနေရာမှာကျနော်မှမဟုတ်တာ... ကျနော်ထင်ထားတာကဒီဖိတ်စာလေးဟာကျနော်တို့အတွက် ယမင်းစီစဉ်လာတာပေါ့...ခုတော့ဗျာ.....
'' အားလုံးကိုအံ့သြစေချင်လို့ပါမမကြီး..ကြိုသာပြောခဲ့ရင်ခုလိုအားလုံးဘယ်အံ့သြနိုင်ပါ့မလဲ..ကြည့်ပါဦး ဟိုနှစ်ယောက်လဲဘယ်လောက်တောင်အံ့သြနေလဲမသိဘူးး ဟီဟိ..''
ဆိုပြီးပြန်ဖြေတယ်လေ.. ကျနော်နဲ့တိုက်ဂါးကသူတို့ရှိတဲ့နားကို တစ်လှမ်းခြင်းပါးစပ်အဟောင်းသားလေးတွေနဲ့လျှောက်လာတာကို
သူတို့လဲဘာဆိုဘာမှမပြောနိုင်တော့ပဲ.ငူငူငိုင်ငိုင်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့... ဟုတ်တယ်လေ..သူတို့က ကျနော့်ကိုယမင်းနဲ့ဖြစ်သွားစေချင်လို့အမျိုးမျိုးမြောင်းဖောက်ပေးနေခဲ့ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ ယမင်းရဲ့ခုလုပ်ရပ်ကကျနော့်အတွက်ပိုပြီးဆိုးဝါးတဲ့ဒဏ်ရာတွေရလာစေမှာကို မြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ထိတ်လန့်သွားကြတာပါဗျာ.. ဒီမှာတင်ယမင်းကသူ့ကိုကြေကွဲတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တွေတွေကြီးကြည့်နေတဲ့ကျနော့်ကိုကြည့်ပြီး
'' ဘာလို့လဲကိုသီဟ... ယမင်းမှာကိုသီဟတို့ကိုအံ့သြအောင်စဖို့နောက်ဖို့ အခွင့်အရေးလေးတောင်မရှိဘူးလားဟင်..ကြိုမပြောမိတာနဲ့ပဲ ယမင်းကိုအားလုံးဒီလိုပဲဝိုင်းကြည့်နေတော့မှာလား? ''
''ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးယမင်းရယ်.ရုတ်တရက်ဆိုတော့ အံ့သြသွားတာပါ ''
ယမင်းရဲ့စကားကြောင့်ဝင်လာတဲ့သူ့မာမီဆီကိုလှည့်ကြည့်မိတော့တာပေါ့.. အဲဒီမှာယမင်းကသူ့မာမီနဲ့ တိုက်ဂါးကိုစမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်..။
''သူက သီဟပေါ့..ဟုတ်တယ်မလားသူကလေး..သမီးကအမြဲတမ်းလူကလေးအကြောင်းပြောပြောနေလို့ အန်တီကသိနေတာပါ.''
'' မာမီသူ့ကိုလွှတ်ထားလိုက် သူကသမီးကိုစိတ်ကောက်နေတာ..လာမမကြီးတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်''
'' သူ့ကိုလွှတ်ထားလိုက်မာမီ ''
တိုက်ဂါးကကျနော့်ခံစားချက်ကိုနားလည်မိလို့အသာလေးပုခုံးကိုဖတ်ပြီး အပြင်ခေါ်ထုတ်သွားပါလေရော... နှစ်ယောက်သားတော်တော်ကြာတဲ့အထိဘာစကားမှမဆိုမိတော့ဘူးပေါ့.. ဒါနဲ့ပဲယမင်းရဲ့စေ့စပ်ပွဲလေးမှာကြေကွဲနေတဲ့နှလုံးသားအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာတွေကို သေချာထုပ်ပိုးပြီးကျနော်တက်ရောက်ပေးခဲ့ပါတယ်... သူတို့နှစ်ယောက်ပျော်ရအင်နေတာကြည့်ပြီးမျက်ဝန်းတွေထဲမှာတော့ ဟိုအရင်ယမင်းကို
ခေတ္တရပ်နားပါဥိးမည်... မပြေပြစ်သောအရေးအသားများအတွက်တောင်းပန်ပါကြောင်း ပြောပါရစေ.. ကျေးဇူးတင်ပါသည်..
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဇာတ်လမ်းရှည်3ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
May 22, 2011, 5:53:00 PM
May 22, 2011, 7:29:00 PM
May 22, 2011, 8:02:00 PM
@Angelhlaing မမရေ..ကျနော့်ရဲ့စာမဟုတ်ပေမဟုတ်တွေကို လာရောက်ခံစားပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်.. @ Jasmine မမရေ..ပို့ခဲ့တဲ့သတင်းကို ရရှိကြောင်းပြန်လာသတင်းပို့မှာပါ..:-) အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...